Home News Duqa Magaalada Taabid Cabdi oo qaban qaabinaayo Mudaharaad lacag lagu soo bixinaayo...
Duqa Magaalada Taabid Cabdi oo qaban qaabinaayo Mudaharaad lacag lagu soo bixinaayo dad masaakiin ah oo uu qorsheynayo in berrito Muqodishu lagu qabto
Duqa magaalada Muqdisho ayaa berito lacago u qaybinayo qaxootiga ku jira xeryaha qaxootiga magaalada Muqdishu si ay uga qayb galaan mudaaharaad lagu wado in dowladda lagu taageero. Waxaa nasiib xumo ah in xiligaan aan ku jirno la isku dayayo in ummadda soomaaliyeed laga been abuuro.
“Dad baahan in Calamo loo soo dhiibay wax macnaa oo ay sameeynaso Ma jirto” xildhibaan ka Mida Xildhibanada baarlamaanka ayaa sidaas u sheegay muqadishu Online. Waxaan shaki ku jirin in ay ka sii xanaajinayso dadka soomaaliyeed ee sida shacuurta leh uga hor yimid go’aanka ay golaha wasiiraada gaareen.
Duqa magaalada muqadishu oo isticmaalaya hantida laga soo ururiyay shacabka, ayaa qaban qaabinaya mudaaharad dadka lagu jaha wareerinaya.
Taabid Cabdi Maxamed oo isaga ka mid ahaa dadkii airport ka wax ka geeyay koorneel Qalbi Dhagax markii la dhoofinayay ayaa hadana doonayo in hantidii shacabka ku bixiyo taabagalinga go’aanka golalaha wasiiraada.
Previous articleBaarlamaanka JFS oo isku diyaarinaya in aay kalsoonida kala laabtaan RW Xasan Cali Kheyre
Next articleWaa maxay saameynta Itoobiya aay ku leedahay Golaha Wasiiraada?
Dowladda Soomaaliya shalay waxa ay ku guuleysatay in ay ka mid...